Afhayeenka Alshabaab: Hadafka weerarka wuxuu ahaa in la dilo Xasan Sheekh – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Afhayeenka Xarakada Alshabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage “Sheekh Cali dheere” ayaa ka hadlay weerarkii shalay ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Sheekh Cali dheere waxa uu sheegay in ujeedka weerarka uu ahaa in lagu dilo ama lagu soo qabto hogaamiyaha dowladda Fedraalka, Xasan Sheekh Max’ud. “Hadafka mujaahidiintu ay ka lahaayeen weerarkaas waxa uu ahaa in gacanta lagu soo dhigo madaxa kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee uu ugu weynyaha Xasan Sheekh, wuu sigtay oo cidiyo farahood ayuu ku baxsaday, oo meel dhulka hoostiisa ah ayaa la geeyey, laakiin waxaan Alle ka rajeyneynaa inuusan baxsan marka xiga” ayuu yiri Cali dheere. Cali Dheere ayaa tilmaamay in kooxda ay u direen madaxtooyada Soomaaliya ay ka gudbeen difaacyadii u yaallay madaxtooyada, hase ahaatee aysan ku guuleysan iney dilaan ninkii ay rabeen. Alshabaab ayaa shalay madaxtooyada ku qaaday weerar nuuciisu uusan horay u dhicin, iyadoo halkaas lagu laayey ragii weerarka soo qaaday, iyagoo iyaguna galaaftay dad aan yareyn. Waa markii labaad ee Alshabaab isku dayaan iney weerar ku khaarijiyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo weerarkii hore uu dhacay markii xilka loo doortay isagoo ku sugnaa Hotel Jazeera. Mareeg.com
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugoodiyey Alshabaab